हावा पानी र माटेा - धरतीमा राम्ररि बाँच्ने सेाच, जानकारी तथा सीपकेा सँगालेा - पृष्ठ 2
चुनाव लेाकतन्त्रकेा महत्वपूर्ण काम हेा जस्ले नागरिकलाइ अफ्ना प्रतिनिधीमाथि निगरानि राख्ने अवसर दिन्छ । डाक्टर बाबुराम भट्टराइले कुन उद्देश्यले चुनावकेा घेाषणा गरे उनै जानुन् । भविष्यमा अात्मकथा लेखे भने भित्री कुरा बयान गर्लान् । तर नागरिकका हिसाबले चुनाव मात्रै त्यस्तेा माध्यम हेा जसबाट राजनीतिलाइ ठीक ठाउँमा ल्याउने प्रयास गर्न सकिन्छ । यसका ’boutमा जति छलपफल हुनु पर्ने हेा त्यति भएकेा चाहिँ छैन । मुलधारका पत्रिकामा उहि पुराना मानिसका पुराना घुमन्ते कुरा छापिएकेा छ छापिएकेा छ । के येा देशमा साँच्चि नै गम्भिररूपले सेाच्ने मानिसहरूकेा खडेरी नै परेकेा हेा त ? वा मिडिएका मालिकहरू तर्सिएका हुन् गम्भिर कुराहरू छाप्न ?
Posted on जुन 12, 2012 by anilbhattarai.	Posted in राजनीति	| टिप्पणी छोड्नुहोस्